Anaanyaatu lammii – Welcome to bilisummaa
= == = = = = = = ==
Anaan haa dhidhimsu
Sin dhabne hanga liphsuu
Anuu rakkoo keessan
Gad taa’ee tilmaamee
Utuun hin nyaatamiin
Kan lafeen caccabu
Isa teenyu hagabuu
Maal si goone uumaa
Maaliif nurran darbu?
Oromoon si waamee Uumaa…
si kadhata Nurraa garagalchi…
Irree abbaa irree Maaf nurratti ilaalta?
Anaa nyaatu Oromoo
Qomoo gaafa xiiqii
Roorroon biyyaa baasee
Sin garsiise cinqii
Seene mana keenya
Lubbuu isin haa maaru
Maal gochuu dandeenya?
Aboonkeeti Balaay Ebla 18,2016 Finfinnee.
(Yaadannoo obboloota koo biyya Misirii gara Xaaliyaaniitti du’a baqa imalaa du’atti dirmaniif.)
Next LAKKISAA HIN GODAANNUU….. (yoo hin xumurtu ta’e hin jalqabin)